Bvisa otomatiki Corrector kubva ku iPhone | IPhone nhau
Bvisa auto-checker kubva ku iPhone
El auto iPhone ndechimwe chezvinhu izvo zvatinoda uye tinovenga zvakaenzana. Isu tinochida nekuti icho chinotibvumidza isu kunyorera pane diki yekubata skrini pane inomhanya chaizvo kumhanya uye tisingatarise zvakanyanya pane zvatiri kunyora. Tinomuvenga nekuti dzimwe nguva anoita kunge ane hupenyu hwake uye anonyora chero chaanoda, zvichipa nguva dzakakodzera joko rakanakisa remuseki ari pabasa.
Uye zvinhu zvinowedzera kuwedzera kana tikashandisa mitauro inopfuura imwechete sezvo, zvirinani izvozvi, iyo iPhone corrector hairemekedze mitauro yakati wandei panguva imwe chete, iyo ichaita, semuenzaniso, pakunyora Mbudzi Simulator (mutambo wakakurumbira) iwo akazvimiririra atinyorere «Drop Simulator», kuti hapana ine chekuita neanopenga mbudzi simulator.
Matanho ekutevera kudzima iPhone kusarongeka
Kana iwe uri mune imwe yenyaya dzakapfuura uye iwe usiri kuda kuti izvi zviitike, zvakanakisa iwe zvaungaite ndeizvi Disable concealer otomatiki. Iyi nzira yakapusa inodzivirira kumwe kuvhiringidzika. Kugadzirisa otomatiki corrector tichaita zvinotevera:
Isu tinovhura iyo Zvirongwa.
Takatamba pa General.
Isu tinodongorera pasi uye tinyore Yekhibhodi.
Uye, sezvaungave wafungidzira, tinobvisa AutoCorrect.
Zvinokurudzirwa kusiya yakamisikidzwa Tarisa chiperengo. Kana isu tikasiya iyi sarudzo yakamisikidzwa, haigadzirise iwo mavara, asi isu tichaona mutsetse mutsvuku pasi peshoko ratakanyora "zvisizvo", uye ini ndinonyora zvisirizvo mumakotesheni makotesheni nekuti isu zvimwe tinoida nenzira iyoyo, pamwe nekuti iri mune mumwe mutauro kana nekuti iri isu takaposhera zvakanaka nechinangwa.
Uye zvakanaka, irowo matope ... nzira ... yakakungurutswa ... ZVESE. Ini ndinofunga ndinofanira kuidzima paMac yangu futi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Bvisa auto-checker kubva ku iPhone
Dai ndaifanira kumirira kusvikira nhasi kuti ibviswe, ndingadai ndakafa. xDDDDDDDDDDD… ..
Kunyangwe zvakadaro, zvirinani kunonoka kupfuura kare ... XD
Chokwadi ndechekuti corrector haandinetse. Chinondinetsa ndechekuti pese pandinonyora "a" zvinondiisa "al" uye zvinondirova ... hauzive kana paine imwe nzira iyo yega inogona kutsakatika?
Enda nekutenda neruzivo, ini ndichangoisa uye zvirokwazvo, zvinoshanda.
Zvakanaka, kana muchengeti anofara akandisvitsa kumusoro wangu, zvinova ndezvekuti iwo masms airatidzika kunge gwaro reBOE rine madudziro akaiswa zvakanaka, hehe.
Kune avo vedu vanonyora maSMS mumitauro isiri iyo iyo iPhone (Basque, Catalan, Aranese, ...) zvakakosha.
David, ini ndiri Valencian uye ndine chiCatalan sekhibhodi zvakare, sezvo ndakatenga iyo iPhone makore maviri apfuura…! Ndiri kuchinjanisa pakati peSpanish neCatalan, pasina matambudziko. Ndiri kukuudza nekuti ndinoshamisika kuti haugone kuiwana, sezvo iri pane iOS! Shuwiro yakanakisa.
Zviri nyore, iwe enda kumasetingi, ipapo zvakajairika, ipapo iyo keyboard, uye ipapo unobvisa inogonesa auto-kururamisa, uye ndizvozvo.
Zvinogona kuitwa ne iphone pasina kusunungura kana chero chinhu?
Ini handinzwisise kuti nei Installer achipihwa mukurumbira wakanyanya pamusoro paCidya mune ese midhiya. Asi zvakanaka kune avo vanofarira kunyorera uku zvakare kuri muCidya kungave kuwedzera kuBossPrefs kana vakazvimiririra. Kwaziso.
Pindura kuna Asdriver
Inokosha kune avo vedu vanoda kupfupisa muSMS ... uye zvakanyanya kana mutauro wedu uri mutauro uye tisingashandise duramazwi reSpanish.
Asi zvirokwazvo, iwe unofanirwa kuita jailbreak handiti? hapana nzira yekuzviita "zviri pamutemo"? Nekuti iyo sarudzo yakapihwa naTruquijaime haishande chero kupfuura muIphone EDGE, mune iyo 3G hapana nzira yekumisa auto-kururamisa.
Mumwe munhu kuti aipe chiedza?
Pindura kuna Didibat
Oops, ini ndakaisa iyo CToggle yeBossPrefs uye ndikamuremadza asi ini ndichiri kuwana iyo Autocorrect :(.
Ini ndinobvumirana naAsdriver, asi ini handisi kuwana iko kunyorera muCindya, ungandiudzawo here kuti vaviri vacho vanowanikwa kupi?
Ini ndichangobva kugadzirisa Cidya asi hapana, kana haina kudaidzwa zvakafanana….
djwild inonzi CToggle, ndeyaBossPrefs vanhu, kana iwe ukapa shanduko (shanduko kana zvinhu zvitsva hehe), inozoonekwa pakati pekushandisa kwanhasi.
Akakwana asdriver !!!, ini ndatova nazvo zvese, asi mumwe mwanakomana we… .. ndinofunga kuti akandiita zvachose dodgy nekuti izvozvi haina kumisikidzwa neimwe nzira.
Ini ndato bvisa iyo autocorrector KB uye ndakaisa mese mumabossprefs uye mune application chete, uye corrector haana kudzoreredzwa….
Chinhu chake, sezvo tiinacho muboss, chingave chekukwanisa kuchiita uye kuchiisa pamadiro…. Ngatione kana ndine nzira yekuigadzirisa porke, aaaaarrrrgggg !!!! uye kuyedza kutangidza iyo iPhone uye ini ndakaitwa keda neiyo mazanita !!!!
Mai vakamubereka !!!!!
Sekubvunza kwaAndWake, pane imwe nzira here yekubvisa mucheki mu "zviri pamutemo" 3g?
Dj wild ndinongova neiyo yega yega, sezvo maBossPreffs akandirova zvakapunzika zvisingawanzo kunyanya nekubatana kwe3g, ndobva ndazviburitsa. Ndiine Winterboard ini ndinobata, ini handioni BossPreffs yakakosha sezvavanotaura, ushingi.
PS: Izvi zvatoita kunge foramu haha
Zvakanaka, pakupedzisira ndakazowana zvese, amai vakamubereka, nezvose zvaaiva nazvo, zvachose.
Zvakanaka na, ndazviwanira ini kuyedza iyo Ctoggle zvakare uye hapana kana imwe kana imwe inoshanda, zvirinani kwete muna 2.0.1.
Imwe yacho inokosha, asi ini handina chokwadi kana akaimonera, kana paakaedza kuiuraya. Zvisinei, pachave neke kuedza….
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri na "al", zvikasadaro, zvinondikodzera, dzimwe nguva zvinonetsa kuwana mavara ese nemunwe wangu uye inogadzirisa zvikanganiso zvidiki, asi ini handinzwisise "al". Chaizvoizvo, ini handinzwisise kuti iwe unotsiva iro izwi kana warova nzvimbo. Ini ndinofunga zvingave zvirinani pane kudzima izwi nekurova X, ndichifanira kurigamuchira kana iwe uchida kushandisa zano, handizive kana ndikazvitsanangura ...
dj musango nekuti isu tatoziva kuti 2.0.1 haishande ndine 2.0 uye pasina dambudziko hombe, kwaziso
Save munhu wose
Ndine iPhone 8GB ine vhezheni 2.0.2 uye ini ndoda kubvisa iyo isina kugadzirisa yaaaa !!! esque inondiita crazyoooo uye ini ndiri benzi pane izvi zvandiri kuverenga iwe uye ini handinzwisise chero chinhu nezve na munhu ane moyo murefu anganditsanangurira ???
Hapana munhu akapindura mubvunzo mumwe chete kwandiri, asi zvinoita sekunge iri yepamutemo iPhone, hapana nzira yekumisa iyo corrector. Iyo nyaya yemoyo murefu uye "kudzidzisa" iyo iPhone kusiyanisa maitiro aunoda kunyora. Paunoramba kururamisa kaviri kana katatu hazvicharatidziki. Haisi yake chinhu, asi hapana imwe.
hesi vanhu .. mumwe mubvunzo ini ndotarisa kunge mapenzi asi hazvina basa
Kubvunza ndiko kunozikanwa
mubvunzo wangu ndewekuti chii Cidya uye ndingaite download kupi
sezviri pachena ishanduro yemhando yekuisirwa .. mumwe munhu ndibatsireiwo ndapota
sezvo ini ndoda kuitora
Pindura kune polo
Kune imi mose musingazive, makambani anobhadharisa mairi kana katatu mareti eSMS anotumirwa kubva ku iPhone ine mavara ane maaccents kana "ñ", saka kudzima spell checker kwakakosha, mukuwedzera pakushandura nzvimbo yemutauro. Nezve zvimwe zvinongedzo:
randall kubva ku costa rica akadaro
Kwazisai varume, ndinobva kuCosta Rica, ndangotenga 8gb iPhone uye sezvamunoziva hapana mvumo yekuishandisa pano, asi ndakabhadhara mumwe munhu kuti andivhurire, ndinoda kukubvunza iwe zvinotevera zvinotevera,
1 pavanotaura pano pamusoro padanho rechitatu) kuti isu tinofanirwa kuzorodza zvavanoreva, zvinoitwa sei? Ndiri kutya kuiseta zvekare uye kuti yakavharika, nekuti ini ndaizofanira kubhadhara mumwe munhu zvakare kuti aisiye ichindishandira ine SIM kubva pano.
2 Ndino dhawunirodha-kumisikidza mafomu uye kupi kune yangu iPhone, chokwadi ndechekuti ndakaverenga ndikaona zvinhu zvakawanda zvepamusoro asi ini handigone kana kusaziva kuzviita.
3 Ini handina zano rekuti vakakiinura sei, kana nechirongwa chipi, ini ndinongoziva kuti iri vhezheni 2.0.2 (5C1).
4 ndinoshandura sei bhaisikopo rose ku iphone, pavakandipa, maTransformer akauya asi mune imwe synchrony neiyo itunes, yakandisiya uye handina zano kana kuti ndoidzosera sei kana ichigona.
Ndatenda zvikuru kune zvese uye ndine urombo kana paine mibvunzo yakawanda.
Pindura randall kubva ku costa rica
Tarisa, ini ndinowedzera izvo iwe zvaunoisa mumanyuko asi ini ndinozorodza masosi uye muTweaks iro rakazvimiririra KB hariratidzike, ndokumbira unditaurire zvandingaite, nekuti zvinondiita kuti ndichinje zvinyorwa zvandinoda.
GURU !! ndinokutendai zvikuru
Pindura kuna nanok
Mhoroi, munhu anogona kundiudza kuti cidya here kana kuti ndinoivhura sei pane yangu iphone?
Kuremadza iyo iPhone spell yekutarisa iri nyore kwazvo, iwe unofanirwa kuenda ku:
KUGADZIRA / GENERAL / KIBHODI / Spell CORRECTOR
Pindura kune sounia
Hamilton J. Silvera akadaro
Usatamba neni, zvakanyanya kuita chinhu chakanaka 🙁
Pindura Hamilton J. Silvera
Francisco Manuel Alomar akadaro
RENGUVA RUPENYU SPAIN
Pindura kuna Francisco Manuel Alomar
Maitiro ekudhawunirodha iyo nyowani iOS 9 beta 5 mifananidzo
Dhawunirodha iOS 9 mapikicha e iPhone